~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: မှတ်သားမိတဲ့ Quotes တစ်ချို့(၃)
မှတ်သားမိတဲ့ Quotes တစ်ချို့(၃)
ဒီဘလော့ကို လာဖတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေတော့ မသိပါဘူး။ ကိုယ်ကိုတိုင်ကတော့ ဒီဘလော့ကို မကြိုက်ပါဘူး။ post အတင်ကြဲတဲ့အပြင် ကိုယ်တိုင်ရေးမဟုတ်ဘဲ Shared postတွေများလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လည်း blogging လို့သာ ပြောနေတာ... သူများတွေရေးထားတဲ့ ဘလော့လေးတွေ လိုက်ဖတ်တာများပါတယ်။
တကယ်တော့ ကိုယ်တိုင်ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ရေးမယ်ဆိုတော့ ရေးရမှာ နည်းနည်းခက်သလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ ...... "မှတ်သားမိတဲ့ Quotes တစ်ချို့"ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး postကို တင်ချင်ပါတယ်။ ရေးရလွယ်ပြီး သူများတွေအတွက်လည်း အကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ပါ။ ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်..... :)
တကယ်တော့ quotes တွေဟာ ကျွန်မတို့လူသားတွေအတွက် တကယ်ကို အရေးပါပြီး အသုံးဝင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆုတောင်းရုံနဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ၊ ကိုယ့်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်အောင် လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါ၊ ကိုယ့် ယုံကြည်မှုတွေ ပိုပြီးခိုင်မာဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အခါ ပညာရှိတို့ ပြောကြားခဲ့တဲ့ ဒီစကားလေးတွေဟာ သိပ်အသုံးဝင်ပါတယ်။ စိတ်အာဟာရလေးတွေပေါ့။ အမလေး.... နိဒါန်းကလည်း ချီနေလိုက်တာနော်.... လိုရင်းကို မရောက်နိုင်တော့ဘူး။ စရေးတော့မယ်နော်.... အများကြီး တစ်ခါတည်း မရေးနိုင်လို့ အပိုင်းနဲ့ ခွဲရေးဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။း)
(၁) ပထမဆုံးတစ်ခုက...."အရိပ်ကိုလို နေပူကစောင့်....တဲ့... စောင့်နေရတာ ကြာတယ်။ အပူခံပြီး စောင့်မနေနဲ့။ နေရိပ်တဲ့ဆီ အမြန်လျှောက်သွားလိုက်"
တဲ့။ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ ပြောကြားခဲ့တဲ့ စကားစုလေးပါ။ original သဘောကတော့ နေပူခံပြီးရင် အရိပ်လာမယ်လို့ အားပေးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်က အေးလာမှာပဲဆိုပြီး နေပူမှာ ရပ်စောင့်နေမဲ့အစား အချိန်မဆွဲဘဲ နေရိပ်မဲ့နေရာကို အမြန်ရှာပြီး သွားဖို့ တိုက်တွန်းဆုံးမထားတာပါ။ ဒီစကားစုလေးကို ဒုတိယနှစ်လောက်တုန်းက အစ်မဝင်းကွဲတစ်ယောက် ပေးတဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ အသိပေးစကားစုများဆိုတဲ့ စာအုပ်သေးသေးလေးကနေ ဖတ်သိခဲ့ရတာပါ။ အပိုင်းတော့ မမှတ်မိပါဘူး။ အပိုင်း (၃)ပိုင်း ရှိတာတော့ မှတ်မိပါတယ်။
(၂) နောက်ထပ် အဲ့စာအုပ်လေးတွေကပဲ မှတ်သားမိတဲ့ စကားစုလေးတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ "လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်လွန်းရင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ရောက်သွားမယ်။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရမုစိုက်လွန်းရင်လည်း လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ရောက်တတ်တယ်။ " တဲ့.... အရမ်းကို မှန်ကန်တဲ့ စကားစုလေးပါ။ ဆရာတော်က ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကြီးကို ဂရုအစိုက်လွန်ပြီး လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှောင်မပိတ်ထားမိအောင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစွန့်ပယ်ပြီး ထင်ရာမဆိုင်းဖြစ်အောင် ဆုံးမထားတဲ့ အလယ်အလတ်ကျင့်နည်းလေးတစ်ခုပါပဲ။ အရမ်းကို မှန်ကန်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ စကားစုလေးပါပဲ။
အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက တမင်တကာ မှတ်သားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ခုချိန်ထိ ခေါင်းထဲဆွဲနေတဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကျင့်သုံးတဲ့ စကားစုလေးပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြီး ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ သိပြီးသားလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်ကြမှာပါ။
(၃) နောက်တစ်ခုက "မုန်တိုင်းပြီးရင် လေပြေလာမယ်" ဆိုတဲ့ quote လေးပါပဲ။ ဂုဏ်ထူးတန်းတက်နေတဲ့ အ ချိန်လောက်တုန်းက magazineတစ်စောင်ကနေ ဖတ်ရတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကနေ ရခဲ့တဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးတစ်ခုပါ။ မိသားစုမှာ တကယ်ကို စီးပွားရေးရော၊ လူမှုရေးပါ မုန်တိုင်းထန်ခဲ့တဲ့အချိန်၊ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေ အဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်မှာ ရလိုက်တဲ့ အားဆေးကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ သိပ်မှန်တဲ့ စကားစုလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အဆိုးတွေပြီးရင် အကောင်းတွေ လာမှာပဲလေ။ လောကကြီးမှာ ဘယ်အရာမှ တသမတ်တည်း ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စာရေးစရာကတော့ အဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်နဲ့အတူ ပြောတာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ဆွဲသွားတာကတော့.... မုန်တိုင်းပြီးရင် လေပြေလာမယ်.... ဆိုတာပါပဲ.... စိတ်ညစ်စရာတွေ အရမ်းများခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ ကိုယ့်အာရုံတွေကို အိမ်ကအလုပ်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကူလုပ်ပေးရင်း၊ juniorတွေကို စာပြန်သင်ရင်း၊ စာကြိုးစားရင်း အမြဲတမ်း ပြုံးပျော်ပြီးနေနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ စကားစုလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးက livelyမဖြစ်ဘူး။ အမြဲတမ်း ခပ်တည်တည်နဲ့ဆိုပြီး မချင့်မရဲနဲ့ အမြဲ ပြောတတ်တဲ့ အဒေါ် လက်ဖျားခါသွားတဲ့အထိပါပဲ။ ပညာရေးအပိုင်းမှာလည်း UCSYတက်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက် မရဘူးခဲ့တဲ့ resultကိုလည်း ပထမဆုံး ရခဲ့ပါတယ်။ :)
(၄) နောက်တစ်ခုကတော့ ဆရာမဂျူးရေးတဲ့ 'စောင့်ဆိုင်းခြင်း၏ နိယာမ' ဝတ္ထုထဲက စကားစုလေးပါ။ quoteလို့ ပြောလို့ ရမရတော့ မသိပါဘူး။ အဲဒီစကားစုလေးကတော့ "ကိုယ်လိုချင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို ရရှိခြင်းနဲ့၊ ရရှိလို့ ပျော်ရွှင်ခြင်းကြားက ဝှက်ဖဲကတော့ အချိန် ပါပဲ " တဲ့.... စာသားကတော့ အဲ့အတိုင်း အတိအကျတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမပြောချင်တာ အဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲ။ ဖတ်ပြီးပြီးချင်းလုံးဝကို လက်ခံပြီး စိတ်ထဲအမြဲစွဲသွားတဲ့ စကားစုလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် walkmanတစ်ခုကို ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက လိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ ခုချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုလာပေးရင် ဘယ်ပျော်တော့မလဲလေ... နော်?? iPodလေးလိုချင်တာပေါ့။ mp3 player ဆိုရင်တောင် ဟုတ်တုတ်တုတ်... :P.... အကောင်းပြောနေရင်း ဖောက်လာပြီ။ ကျွန်မပြောချင်တာက အချိန်ဆိုတဲ့ ဝှက်ဖဲလေးနဲ့ တွဲပါနေတဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းတရားပါ။ စာဖတ်သူတို့ နားလည်လ်ိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကဲ.... ရေးရင်း ရေးရင်းနဲ့တော့ post တစ်ခုစာ လုံလောက်သွားပြီ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေး post count လည်း တိုးပြီပေါ့။ နောက်မှပဲ အပိုင်း(၂)ကို ဆက်ရေးပါတော့မယ်။
Posted by witch83 at 7:55 PM
Labels: စိတ်အာဟာရ, ဗဟုသုတ, ရေးမိသမျှ
" အသိညဏ်ပိုင်းမှာ ကျွန် မခံတဲ့သူ ".....by ဆရာတော် ...